Sawirro: Sheekh Max'med Al-Jowlaani Hoggaamiyaha JF Shaam oo Ka Qeyb Qaadanaya Dagaalka Magaalada Xalab.
Sunday October 30, 2016 - 11:46:52 in Wararka by Super Admin
Magaalada Xalab ee waqooyiga wadanka Suuriya waxaa si xowlli ah uga socda dagaallo culus oo u dhaxeeya ciidamada xoogaga Islaamiga ah iyo maleeshiyaad shiico ah oo taageera siinaya ciidanka Nidaamka Bashaar Al-asad.
Dagaalka oo maalintiisi 3-aad galay ayay xoogaga mujaahidiinta ku doonayaan in ay hareeraynta uga qaadaan in kabadan 400,000 oo qof muslimiin sunni ah oo cadawgu ku gumaadayo magaalada.
Jabhadda Fatxu Shaam ayaa fasaa’isha islaamiga ah ku hoggaaminaysa dagaalka, waxaa lagusoo waramayaa in mujaahidiinta iyo xoogaga kacdoonka ay qabsadeen goobo istiraatiiji ah balse wali dagaalladu si xowlli ah ku socdaan.
Hoggaamiyaha Jabhadda Fatxu Shaam Sheekh Abuu Max’med Al-Jowlaani ayaa dagaalka si toos ah uga qeyb qaadanaya, sawirro lagu baahiyay barta Fatxu Shaam ee Twitterka waxaa kasoo muuqanayay Jowlaani oo kormeeraya dagaalka Reer Xalab hareeraynta looga qaadayo.
Hoggaamiyahan geesiga ah ayaa dagaalyahanada ka qeyb qaadanaya dagaalka Xalab ku dhiiri gelinaya in naftooda ay Alle ka iibsadaan oo ay furtaan Xalab oo idil ayna la xisaabtamaan ciidamada Nidaamka Nuseyriga iyo maleeshiyaadka shiicada ee caalama lagasoo aruuriyay.
Wariyaal ayaa soo sheegaya in dagaalka hadda xalab ka socda uu wax badan ka bedelanyahay dagaalladii hore marka loo eego kooxaha ka qeyb qaadanaya iyo diyaaradaha dagaalka Ruushka oo hawada ka maqan sababa la xiriirta cirka oo ceeryaamaysan.
Shacabka magaalada Beled Xaawo oo Barakac bilaabay kadib markii ay ciidamo dul degeen.
Shil dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay Magaalada Dirirdhabe.
Iska hor'imaad Khasaara dhaliyay oo ka dhacay magaalada Beled Xaawo.